January 2018 – TPEC
Guddiga Doorashooyinka oo Tacsi u diray Guddoomiye Cabdiraxmaan [Daawo]
GAROWE, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Guddoomiyaha TPEC, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, oo xaaskiisa Muxubo Qorane ay ku geeriyootay dalka Hindiya. Qaar kamid ah xubnaha Guddiga oo shir saxaafadeed ku qabtay caasimadda Garoowe, ayaa Guddoomiyaha iyo qaraabadii ay ka baxday Muxubo Samir iyo Iimaan ALLE uga baryay, waxayna …
Guddiga Doorashooyinka oo Tacsi u diray Guddoomiye Cabdiraxmaan [Daawo] Read More »
GAROWE, Puntland- Waxaa maanta xarunta Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, shir kuwada qaatay Guddiyada Doorashooyinka qaranka Soomaaliya, Puntland iyo ururrada dhawaan iska diiwaangaliyay magaalada Garowe ee heer Puntland. Shirkan oo qayb ka ahaa kulamo wadatashi ah oo Guddiga Federaalka Soomaaliya kawadeen magaalada Garowe, ayaa ku saabsanaa nidaamka dimuqraadiyadda dalka iyo qaabkii lagu gaari lahaa doorasho …
Guddiyada Doorashooyinka Soomaaliya, Puntland iyo Ururrada siyaasadda oo kulmay [Sawirro] Read More »
Urur Siyaasadeedkii 5aad oo iska diiwaan-galiyay TPEC
GAROWE, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland (TPEC), ayaa diiwaangaliyay Urur siyaasadeedkii 5aad oo qayb ka noqonaya qaabka lagu gaari karo nidaam dimuqraadi ah. Ururkan is-diiwaangaliyay ayaa lagu magacaabaa AARAN, wuxuuna kamid noqon doonaa Afar urur oo horay isu diiwaangaliyay. Guddiga Doorashooyinka Puntland, ayaa soo dhaweeyay ururka cusub ee soo biiray, waxayna uga mahadceliyeen …
Urur Siyaasadeedkii 5aad oo iska diiwaan-galiyay TPEC Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland oo Garoowe kusoo dhaweeyay dhigooda Soomaaliya
GAROWE, Puntland- Mas’uuliyiin katiran Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Canoco kusoo dhaweeyay xubno katirsan Guddiga doorashooyinka heer Federaalka, kuwaasoo maalmaha soo socda ku sugnaan doona deegaanada Puntland. Guddoomiye ku-xigeenka TPEC, Maxamud Soofe Xasan iyo xubno kamid ah Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa mas’uuliyiinta heer Federaal si maamuus leh ugu …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo Garoowe kusoo dhaweeyay dhigooda Soomaaliya Read More »
Boos Communication ah oo ka bannaan guddiga Doorashooyinka Puntland
Communication OfficerGuddiga doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa xayaysiinaya boos ka bannaan xafiiska Guddiga oo ah Communication Officer. Halkan kala dag isagoo ah PDF: Communication officer
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo casho u sameeyay madax ka socotay Safer-world
Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC, ayaa hotelka Grand ee magaalada Garoowe, casho sharaf ugu sameeyay madax ka socota hay’adda Safer-world oo maalmahan howlo u joogay caasimadda Puntland. Xafladda Cashada oo ay joogeen xubnaha Guddiga, ayaa lagu sagootinayay madaxdan oo muddooyinkii u dambeeyay guddiga kala shaqaynayay arrimaha hormarinta dimuqraadiyadda Puntland. Cabdijaliil Daahir Af-qarshe oo kamid ahaa …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo casho u sameeyay madax ka socotay Safer-world Read More »
Shaqooyinka ka bannaan Guddiga doorashooyinka Puntland
Guddiga Doorashooyinka Puntland, ayaa xayaysiiyay shaqooyinka labo Xafiis oo kala ah; Xisaabiye Guud iyo La taliye Sharci. Si aad u akhrisato xogta lagaa doonayo iyo qaabka aad u codsanayso fadlan liix Linkiyada Buluuga ah ee ay ku qoranyihiin Shaqooyinka Bannaan. Xisaabiye Guud Taliye Sharci
TPEC iyo Safer-world oo heshiis wada gaaray [SAWIRRO]
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland, ayaa heshiis la gaaray hay’adda Safer-world, taasoo muddooyinkii dambe Guddiga kala shaqaynaysa arrimaha dimuqraadiyadda. Kulan ka dhacay xarunta dhexe ee Guddigu ku leeyahay magaalada Garoowe, ayaa labada dhinac ku gaaray heshiis muddo soconaya oo ku aadan sidii loo tayayn lahaa shaqaalaha TPEC. Heshiiskan oo ay qalinka ku duugeen Guddoomiye …
TPEC iyo Safer-world oo heshiis wada gaaray [SAWIRRO] Read More »
Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Madax ka socota Safer-world oo kulmay [Sawirro]
Waxaa maanta xarunta dhexe ee Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland kulan ku yeeshay xubnaha Guddiga iyo madax ka socotay hay’adda Safer-world kuwaasoo kawada hadlay arrimaha dimuqraadiyadda Puntland. Kulankan oo uu shir Guddoominayay ku-xigeenka Guddoomiyaha TPEC, Maxamud Soofe, ayaa diiradda lagu saaray sidii labada dhinac isaga kaashan lahaayeen shaqooyinka horyaalla guddiga ee la doonayo in …
Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Madax ka socota Safer-world oo kulmay [Sawirro] Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland oo la kulmay ururada is-diiwaangaliyay [Sawirro]
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland [TPEC], ayaa la kulmay ururada siyaasadda ee iska diiwaangaliyay xarunta guddiga kuwaasoo gaarayay tiro ahaan 4 urur. Shirkan oo uu guddoominayay Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga ayaa diiradda lagu saaray sidii TPEC iyo ururada is-diiwaangaliyay uga shaqayn lahaayeen hirgalinta nidaamka Axsaabta badan ee la doonayo in la gaarsiiyo Puntland. Guddiga iyo …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo la kulmay ururada is-diiwaangaliyay [Sawirro] Read More »